Amasiko aseVenezuela, yiziphi amasiko aseVenezuela? | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Absolut Venezuela | | Venezuela
IVenezuela yizwe elicebile lapho kuhlangana khona amasiko amathathu ahlukene njengeSpanish, abomdabu kanye nabase-Afrika. Futhi ubufakazi balokhu yingxenye enkulu yamasiko namasiko aseVenezuela alethwe phesheya, ikakhulukazi evela eSpain nakwamanye amazwe amaningi ase-Afrika. Isiko lendabuko nalo libe nomthelela omkhulu emasikweni athandwayo ezwe, empeleni, njengamanje ingxenye ebalulekile yezwe ivela izinhlanga ezahlukahlukene zomdabu ezisekhona eVenezuela, lapho sithola khona i- I-Warao njengenye yezizwe ezimele kakhulu yezwe neYanomami.
Yize abantu abaningi bebheka amasiko namasiko ngokufanayo, kufanele kubhekwe ukuthi ngalinye linemvelaphi ehlukile. Ngokwesiko singacabangela imikhuba yabantu baseVenezuela abanjalo kunezimpande ezibakhomba njengabantu. Iningi lamasiko aseVenezuela avela e-Europe, e-Afrika futhi imvelaphi yendabuko. Indawo ngayinye inamasiko ayo, ukuzinikela kongcwelengcwele, izinganekwane ezithandwayo nemikhosi edumile ikakhulukazi.
Esikhundleni salokho amasiko aseVenezuela Bazama ukugcina isiko elizuzwe njengefa kwabadala. Ukubonakaliswa kwamasiko wendabuko kudluliswa kusuka esizukulwaneni kuya kwesinye okuyinto namuhla esivumela ukuthi sijabulele imidlalo, ukudla, izisho, izinsimbi zomculo, imidanso kanye nenqwaba yezinto ezisenza sihlangane nesikhathi esedlule. Ngaphakathi kwamasiko aseVenezuela singathola inani elihle lalaba abamele izifundazwe ezahlukahlukene ezakha izwe. Kulesi sihloko sizozama ukuqoqa abamele kakhulu.
2 Izingoma zesintu
3 IChinchorros de Santa Ana
4 Imidanso yesintu yaseVenezuela
5 Ukudansa osathane
6 Ukungcwatshwa kweSardine, elinye lamasiko aseVenezuela
7 Umkhosi weSanta John
8 Izitofu zeCaracas
9 ISan Sebastián Fair
10 AmaPapelones avela eTacarigua
11 Ukushisekela kukaKristu
12 Ukushiswa kukaJuda
13 Izigqoko zeBud
14 Ugwayi nama-calillas
15 Amasiko obuciko baseVenezuela
16 Amasiko kaKhisimusi waseVenezuela
Izakhiwo zendabuko zaseVenezuela ziyinhlanganisela ye- isiko lendabuko lomdabu kanye namasiko ahlukene alethwe phesheya, njengoba kunjalo nangezinye izici eziningi zezwe. Izinto ezisetshenzisiwe kanye namasu asetshenzisiwe ziyefana nalezi ezisetshenziswa amadlozi, kepha ukuzivumelanisa nemvelo kanye nezinguquko zokubhalwa kwezindawo lapho zifakwe khona.
Izinkuni, kanye nomhlanga kanye notshani yizinto ezisemqoka ezisetshenziswa yizizwe ezahlukahlukene zezwe ukwakha amadolobha lapho zihlala khona futhi atholakala kuyo yonke iningizimu-mpumalanga yezwe. Ezindaweni eziniselwa imifula, izindlu ezintantayo ezakhiwe ngasogwini lwemifula zibizwa ngezindlu ezihleliwe futhi zakhiwe ngezinto ezifanayo njengangaphambili.
Ezindaweni ezisezintabeni, izindlu akuselona uphahla nje lokukhosela cabe amakhaya angempela futhi lapho sithola khona i-patio emaphakathi, iphaseji elinamagumbi ahlukene kanye nephaseji. Inkinga ngalolu hlobo lokwakha ezintabeni ukulinganiselwa okubekwe indawo lapho zitholakala khona.
Ngokuya ngezindawo ezahlukahlukene esizivakashelayo ezweni, kungaba ama-Andes, ugu, amahlathi noma amathafa, futhi kuya ngesikhathi sosuku, singathola ukuthi abahlali bangazishaya kanjani izingoma ezahlukahlukene. Izingoma ezijwayelekile zendabuko khombisa okuhlangenwe nakho okuhambisana nezakhamizi nsuku zonke. Lezi zingoma zenziwe njengengoma enesigqi ehambisana nemisebenzi yansuku zonke yabesilisa nabesifazane abenza nsuku zonke emkhakheni. Lezi zingoma zivela esikhathini samakholoni lapho izigqila ezimnyama zazisetshenziswa emasimini futhi basebenzisa lezi zingoma ukuveza usizi lwabo, injabulo, nokuhlangenwe nakho kwabo ...
IChinchorros de Santa Ana
I-chinchorro yinetha elijwayelekile lelo kulenga kuzo zombili izinhlangothi ukulala noma ukuphumula amahora, eyaziwa nangokuthi izando. Yenziwe ngentambo ye-moriche, esetshenziselwa kabanzi ukwenza imikhiqizo yezandla ejwayelekile yezwe. Ama-chicharros okuqala akhiqizwa njengalawa akhona manje, edlulisa imicu emithathu ezungeze izinti ezimbili ezinamathele emhlabathini ukuze akwazi ukweluka imicu futhi akwazi ukuyibopha uhhafu wamafindo futhi ayenze ibe usayizi oyifunayo.
Imidanso yesintu yaseVenezuela
Inani elikhulu lemidanso yendabuko eseVenezuela ibangelwa ukusebenzisana kwamagugu aseYurophu, ikakhulukazi abaseSpain, nabomdabu futhi, ngezinga elincane, ngumAfrika. Umdanso ngamunye unezici zawo kodwa zonke zisalondoloze okushiwo yi-mestizo yaseVenezuela, okholwayo nenjabulo. Imidanso yesintu yaseVenezuela emele kakhulu ezweni yiSebucán noma iPalo de Cinta, iTuras neMaremare.
I-Sebucán noma i-Stick yamaribhoni avela e-Europe iqukethe ukudansa uzungeze isihlahla, ikakhulukazi ngemikhuba egubha ukufika kwentwasahlobo. ILas Turas ngumdanso wenkolo womlingo ojwayelekile odabuka emndenini ogujwa ekupheleni kukaSepthemba kuze kube ngiyabonga imvelo ngezinzuzo ezitholakele inqobo nje uma isivuno sibe sikhulu. Ekugcineni sithola umdanso waseMaremare wokuhlonipha umufi. Amagama alawa midanso athuthukisiwe futhi umdanso uqukethe ukuthatha izinyathelo phambili naphambili.
Minyaka yonke lapho kugujwa iCorpus Christi, lapho kuqinisekiswa khona izinkolelo zenkolo nezomlingo zokulunga phezu kokubi, kwenziwa umdanso wesiko ngokudansa oDeveli ezindaweni ezahlukene zezwe. Amademoni amele uLusifa ukugqoka izingubo ezimibalabala nesifihla-buso esimele inhloso yokuzinikela esakramente elingcwele kakhulu
Osathane baqoqelwe emaqoqweni noma emiphakathini, baphatha iziphambano, amarosari noma enye intelezi yenkolo futhi phakathi nomkhosi bayathandaza, kufaka phakathi imisa. Bafaka amabhulukwe abomvu, ihembe nekapa futhi bagqoka izinsimbi nokuxokozela kulenga ezingutsheni zabo. Amaski aklanywe ngemibala egqamile nokubukeka okunolaka, noma okungenani yilokho abazama ukukwenza. Imvunulo kasathane yakhiwa izesekeli ezahlukahlukene ezifana nomsila, izinsimbi zezinkomo, i-errand ne-maraca. Ukuba yisiko elidume kakhulu ezweni lonke, singathola osathane abahlukene abadansayo abasatshalaliswa ezweni lonke, kepha okubaluleke kakhulu yilawo aseYare, Naiguatá naseChuao.
Ukungcwatshwa kweSardine, elinye lamasiko aseVenezuela
NjengaseSpain, ukungcwatshwa kwesardadi ukubonakaliswa okuthandwayo okuvala umjikelezo wemikhosi yeCarnival futhi kuqinisekise ukuthi kuzophinde kugujwe ngonyaka olandelayo. Umkhosi weCarnival uhlotshaniswa ne- isiko lokuqeqesha ubambo lwengulube olubizwa ngokuthi isardadi futhi olufanekisela ukwenqatshelwa kokudla inyama phakathi nezinsuku zeLente. Phambilini bekukholelwa ukuthi lesi senzo bekuwukuheha ukudoba okuhle nokuzala ezilwaneni okuzoqinisekisa ukudla ngekusasa.
Udwendwe lokungcwatshwa kwesardadi luholwa ngumshushisi ophethe ukusula imigwaqo okuzongcwatshwa ngayo isardadi, kulandele umfana wase-altare nompristi olandelwa udwendwe lomngcwabo olwenziwe inqola ehlotshiswe ngeminikelo ehlukile. yezimbali. Ngaphakathi kweflothi isibalo sardadi simelwe.
Umkhosi weSanta John
Kugujwa njengaseSpain ngoJuni 24 futhi gubha ukuzalwa kongcwele. Lo mgubho uhlanganisa inqwaba yamakholwa nabazinikele ezifundazweni lapho kugujwa khona, ngoba awugujwa ngokulingana kuzo zonke izifundazwe zaseVenezuela. NgoJuni 24 ekuseni ngovivi, ongcwele ulungele ukuphuma endlini lapho etholakala khona esontweni ephelezelwa abazinikele kakhulu ngakho-ke ekufikeni kugujwa imisa eqala ukuphindaphinda izigubhu ezihamba kulo lonke idolobha, zihlangene nosanta othola ukubongwa kwamakholwa njengoba edlula.
Ukudla kwendabuko kwaseVenezuela akuzalwanga ukushisa kwabapheki abakhulu, noma abapheki bezindawo zokudlela ezinhle, ukudla okujwayelekile kweCaracas Wazalelwa ekhaya lamaVenezuela, isithelo somsebenzi wakhe nentshisekelo yokupheka nangokuzama ukuthola okuningi ekudleni abakutholile emasimini nasezilwaneni. Ngenkathi abesifazane beqala ukuphatha ikhishi, ukudla kweCaracas kwaqala ngokukhiqizwa kophudingi namaswidi, ikakhulukazi lapho izisebenzi zaziphethe ukwenza ukudla, ukuzama ukwanelisa abathengi.
Njengamanye amasiko aseVenezuela, ukudla kwaseVenezuela kuthonywa kakhulu yiSpanish, Ama-Afrika futhi kulokhu futhi kungowomdabu. Izitsha ezijwayelekile zaseVenezuela yizihlabathi zommbila, i-black sado, ikhekhe le-aubergine ...
ISan Sebastián Fair
ISan Sebastián International Fair ingenye yamasiko aseVenezuela abaluleke kakhulu ezweni. Kubungazwa edolobheni laseSan Cristóbal, elisendaweni yaseTáchira, emasontweni amabili wesibili kaJanuwari. Futhi eyaziwa ngokuthi iBullfighting Fair yaseVenezuela Kuyisimo esihle sabathandi bezinkunzi zezwe ukujabulela abalwa nezinkunzi emhlabeni jikelele.
Lo mbukiso uheha inani elikhulu lezivakashi zakwamanye amazwe futhi kungokuhlangenwe nakho lokho inikeza amathuba amahle wokuzijabulisa esifundeni saseTáchira njengakulo lonke izwe, ngoba ngaphezu kwabalwi bezinkunzi besithunzi somhlaba wonke esaziwayo, ochwepheshe abakhulu bezwe nabo baya kulo mbukiso, okungebona abambalwa.
AmaPapelones avela eTacarigua
ITacarigua yakhiwe yimiphakathi edobayo nezolimo esesiqhingini saseMargarita. Sekuyiminyaka eminingi benza iphepha lokushicilela ukuze lisetshenziswe ngaphakathi futhi bathengisele eminye imiphakathi. Ipaponon livela ezimobeni elinomumo oyindilinga, ilinganisa cishe amasentimitha angama-20 ukuphakama nesisekelo samasentimitha ayi-10 kuye kwayi-15. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukwenza ushokoledi noma ikhofi kube mnandi, ukwenza ama-guarapos athungiwe noma aluhlaza onolamula.
Ngokufika kweSonto Elingcwele, njengaseSpain, amakholwa aya emasontweni ayokwenza iminikelo nezenzo zokukhumbula isenzo indodana kaNkulunkulu esenzele bonke abantu. Kepha eVenezuela, kukhona futhi i- ukumelwa komphakathi okubeka phansi izinsuku zokugcina zikaKristu emhlabeni. Kulezi zimelo singabona ukukhathazeka nokufa kukaKristu, okwenziwe ngezigcawu eziyi-15 ezikhuluma ngendaba kaJesu Kristu.
Kodwa akugcini ngokumelwa nokufelwa nokufa kukaKristu, kodwa futhi nezigcawu zokungena kukaKristu eJerusalema, ukuphindaphindwa kwezinkwa, iSidlo Sakusihlwa Esingcwele, insimu yeminqumo, iVia Crucis, uvuko, ukubethelwa.
Ukushiswa kukaJudas kungenye yamasiko aseVenezuela amele ukungeneliseki komphakathi ngemicimbi yezepolitiki kanjalo nokuziphatha kwawo jikelele, kepha futhi kusebenza ukuqeda iLent ngokulungiselela ukuvuswa kwakhe ngonyaka ozayo. Isizathu salokhu kusha ukukhumbula ukukhaphela kukaJudas uKristu, kubhekiswa ekukhohlisweni komlingiswa ngabantu bakhe. Unodoli kaJudas oshisayo wenziwe ngendwangu, obomvu obudala namanikiniki, kugcwele iziqhumane, ezikhanyiswayo lapho lo doli elenga futhi zishiswa.
Izigqoko zeBud yizo Umthombo oyinhloko wokuthola imali eMargarita Island. Ngaphandle kokubukeka kwayo okulula, ukwenziwa ngezandla kwalezi zigqoko akulula neze futhi kudinga ikhono eliningi ukwazi ukuzenza. Lolu hlobo lwesigqoko besilokhu samukelwa isikhathi eside ezweni naseziqhingini zaseCaribbean, kepha eminyakeni yamuva nje ukukhiqizwa kuncishiswe kancane, kujwayela izidingo zamanje. Ngaphezu kwezigqoko ezinamahlumela, baphinde benze izikhwama, iragi, namakepisi ...
Ubuciko bokukhiqiza nokukhiqiza ugwayi buyagcinwa njengenye yamasiko omndeni waseVenezuela, yize eminyakeni yamuva nje eminye imisebenzi ekhiqiza kakhulu kwezomnotho iyayenza ukukhiqizwa kukagwayi kuthatha isihlalo esingemuva. Ukukhiqizwa kukagwayi kuhlukaniswe ngeCalilla, ukwenza ugwayi omncane wezinto ezikhethiwe. Ngakolunye uhlangothi sinoGwayi, okuhloswe ngalo ukukhiqiza ngobuningi futhi njalo. Phambilini ugwayi wawuthengiswa ezweni lonke, kepha ngenxa yokwehliswa kokwehliswa, okwamanje usadliwa kuphela kuHulumeni nasemphakathini waseLos Millanes lapho kutholakala khona iningi lalesi sitshalo.
Amasiko obuciko baseVenezuela
Phakathi kwemikhiqizo yezandla yendabuko eyenziwe eVenezuela singathola izinto zokuhlobisa, ukudla, iziphuzo, izitsha zobumba, amaKhesariya, utshwala, izinto zokubhala, imidwebo, izindwangu, izicathulo, okokugqoka, abakhandi begolide, imihlobiso, izinto zokhuni, izando, iziphandla ... Lezi Izinkulumo zobuciko zivumela izakhamuzi ukuthi khombisa indlela yokuphila nomphefumulo wabaseVenezuela.
Amasiko kaKhisimusi waseVenezuela
Ukuba ngabantu abakhonze kakhulu, ngokufika kukaKhisimusi, elinye lamasiko aseVenezuela ukuthi zonke izingxenye zeVenezuela ilungiselela ukufika kwengane enguJesu. Ekuqaleni kukaDisemba, injabulo yezinsuku ezisondelayo isiqala ukubonakala futhi imihlangano, ukuqwayiza, imikhosi yokubungaza ukufika kwengane uJesu kuwo wonke amagumbi ezwe kuya ngokuya kwanda. Kepha ngaphezu kwalokho sithola nokunye okuboniswayo ukuthi kuma-coscone kunganweba ukugubha uKhisimusi kuze kube nguFebhuwari, njengamabhonasi kaKhisimusi, umkhombe, amapayipi, izixuku zamabhonasi kaKhisimusi, ama-parade, ama-skateboards, imidanso yabelusi, usuku kwabangcwele abamsulwa, ukufika kweZazi, unyaka omusha, unyaka wakudala ...
Sithemba ukuthi uzithandile zonke lezi Amasiko aseVenezuela noma ngabe ubufuna okungaphezulu, lapha ungafunda ukuthi yini i- amasiko eVenezuela ejwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amasiko aseVenezuela
HildA DE MIRABAL kusho
Ngiyalithanda izwe lami iVenezuela, lihle, akudingeki sibe nomona nganoma yiliphi izwe, ngoba linakho konke, ukubukeka komhlaba, amabhishi, izintaba, imifula, njll. Ngiyalithanda izwe lami, angiliguquli ngalutho, ngithanda amasiko nemikhuba yalo
Phendula ku-hildA DE MIRABAL
Brian Pinto kusho
Leli yizwe elikhiqiza ubisi noju! Amen ...
Phendula u-brian pinto
leanyeli varela guillen kusho
Q desiccation enyanyekayo ezombusazwe ezimsulwa zimbi kakhulu
Phendula i-leanyeli varela guillen
EMMA SANCHEZ GARCIA. kusho
Sawubona waseTáchira, izindawo zezitobha ezinhle, zingami phezulu esibhakabhakeni yingakho yinhle, Venezuela yami, akudingeki sibe nomona nganoma yiliphi izwe, ngoba linakho konke, ukubukeka, amabhishi, izintaba, imifula, njll. Ngiyalithanda izwe lami, angiliguquli ngalutho, ngithanda amasiko nemikhuba yalo. Kusuka kuLa Grita.
Phendula ku-EMMA SANCHEZ GARCIA.
izimbali ezikhanyayo ze-angelinys prada kusho
sawubona ovela eMamporal Venezuela yizwe elikhulu kakhulu futhi amasiko amaningi anezinto eziningi mina nathi sonke esingazijabulela futhi lezo zinto yimifula, amabhishi, amapaki, izintaba nezinye izinto eziningi iVenezuela inefulegi layo, iculo layo futhi vele izwe lakubo selivele ukuthi eVenezuela awukwazi ukuthola ukudla futhi uzwa kuphela ukuphanga okumsulwa ezindabeni, kancane kancane izwe lami lizoshintsha, ngiyazi, hhayi emuva kepha phambili nangaphambili futhi ngalokho kuphela ngeke ngishintshe, ngisho igolide eVenezuela.
Phendula ku-luz angelinys flores prada
IVenezuela yizwe elikhulu kakhulu futhi amasiko amaningi anezinto eziningi mina nathi sonke esingazijabulela futhi lezo zinto yimifula, amabhishi, amapaki, izintaba nezinye izinto eziningi iVenezuela inefulegi layo, iculo layo futhi izwe lakubo selivele likhona eVenezuela Angikwazi ukuthola ukudla futhi ukuzwa ezindabeni kuphela, ukwebiwa okumsulwa, kancane kancane izwe lami lizoshintsha, ngiyazi, hhayi emuva kodwa emuva nangaphambili futhi ngenxa yalokho kuphela ngeke ngiguqule iVenezuela, ngisho negolide. kimi phezulu kwesibhakabhaka yingakho yinhle, iVenezuela yami, akudingeki sibe nomona nganoma yiliphi izwe, ngoba linakho konke, ukubukeka, amabhishi, izintaba, imifula, njll. Ngiyalithanda izwe lami, angiliguquli ngalutho, ngithanda amasiko nemikhuba yalo. Kusuka eLa Grita. Ngiyalithanda izwe lami, iVenezuela, lihle, akudingeki sibe nomona nganoma yiliphi izwe, ngoba linakho konke, ukubukeka komhlaba, amabhishi, izintaba, imifula, njll. Ngiyalithanda izwe lami, angiliguquli ngalutho, ngithanda amasiko nemikhuba yalo
Phendula ukuze uthinte kabusha
UKeudys Garcia kusho
Izwe lami lihamba phambili, linamasiko namasiko amahle kakhulu
Phendula ku-Keudys garcia
veronica jaramillo kusho
Sawubona, nginguVerónica Jaramillo futhi nginguTigres.Ngiyaluthanda lolu qeqesho, ngiyethemba wonke amakhasi ayenjengaleyo enemiqondo eminingi.
Phendula u-verónica Jaramillo
Siyabonga ngokubeka leli khasi
zoraida ramarez kusho
Ngaphandle kwezimo esihlala kuzo, iVenezuela yizwe elihamba phambili .. Ngiyayithanda futhi ngizoqhubeka lapha .. amasiko namasiko ayo .. Ngingu-Andean futhi abekho abantu abalunge futhi abasebenza kanzima njengamaGochos
Phendula ku-zoraida ramarez
jon mayorca kusho
Sawubona, ngifuna intombi, ithi 33
Phendula ujon mayorca
LE NETWORK IPHAKATHI KAKHULU UKUZE UBONE OKUNCANE KWEVENZUELA NAMASIKO AYO
Ngiyalithanda izwe lami, yilo elihamba phambili emhlabeni futhi yize okwamanje singaphilile kangako, ngiyazi ukuthi abaseVenezuela bazolishiya leli zwe… nginezwe lami…. Singabantu abangamaqhawe futhi sizokuvikela ngandlela zonke….
johana gonzalez kusho
kuhle kakhulu kepha isincomo akuwona ama-papelones de Tacarigua, leso sithombe sivela esigodini saseQuebrada Negra esingumasipala waseSeboruco, esifundazweni saseTachira
Phendula ujohana gonzalez
i-yolkis ugas kusho
Ngithande le ndatshana… .isihle kakhulu futhi ngiyayithanda. Ngiyakuhalalisela…. # Amovenezuela
Phendula i-yonelkis ugas
Uhamba kanjani usuka eHavana uye eVaradero